YouTube Watch Hours များကို ၀ ယ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
သင်ကသင့်ရဲ့ Channel ကိုငွေရအောင်လုပ်ပါရန် 4,000 နာရီထိကူညီပေးသည်
စောင့်ကြည့်ခြင်း YouTube နှင့် Google ရှာဖွေမှုအဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ကြည့်ပါ
၀ န်ဆောင်မှုသည် ၂၄-၇၂ နာရီအတွင်းစတင်ပြီးအပြီးအစီးမပြီးမချင်းနေ့စဉ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်
အမြန် & အာမခံချက်ပေးအပ်
YouTube ကြည့်ရှုချိန်များကို မြှင့်တင်ရန် အမြန်နည်းလမ်းများ
Statista အစီရင်ခံစာအရ မိနစ်တိုင်းတွင် နာရီပေါင်း 500 ကျော် ဗီဒီယိုများကို YouTube တွင် အပ်လုဒ်လုပ်ကြသည်။ အကြောင်းအရာများစွာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို အကြံပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အထိ၊ YouTube သည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့် အကြံပြုထားသော ဗီဒီယိုများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် ဗီဒီယိုများပေါ်တွင် ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်အပေါ် မှီခိုအားထားခဲ့သည်။ YouTube ၏ တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် YouTube သည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို အမိန့်ပေးရန်အတွက် မက်ထရစ်များစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။
မက်ထရစ် 'Watch Time' ကို YouTube တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် နံပါတ်တစ်အချက်ဟု ယူဆပါသည်။ YouTube သည် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုသည့်အချိန်ပမာဏနှင့် ၎င်းတို့သည် သင့်ဗီဒီယိုများနှင့် တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးသည်။ ၎င်းသည် ကြည့်ရှုမှုများအကြောင်းသာမက၊ သင့်ဗီဒီယိုများကို လူများက မည်မျှကြာကြာ စွဲမြဲနေစေသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကြည့်ရှုမှုများကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် လွယ်ကူသော်လည်း၊ သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို စနစ်တကျ တိုးမြှင့်ရန် ခက်ခဲကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ YTpals က သင့်အား ကူညီပေးနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် YouTube ကြည့်ရှုချိန်များကို ဝယ်ယူပါ။ သင့်ဗီဒီယိုများ၏ YouTube နှင့် Google ရှာဖွေမှုအဆင့်များကို တိုးမြှင့်ရန် YTpals မှ။
ကြည့်ရှုချိန်သည် သင့်အကြောင်းအရာသည် ကြည့်ရှုသူများကို မည်မျှကြာကြာ ပါဝင်စေသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည့် မက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကြည့်ရှုသူများအတွက် သင့်ဗီဒီယိုများကို ပိုမိုရှာဖွေနိုင်စေရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန် နည်းလမ်းများ မရောက်မီ၊ YouTube ၏ အဆင့်သတ်မှတ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်၏ သမိုင်းကြောင်းကို အကျဉ်းချုံးကြည့်ကြပါစို့။
2012 ခုနှစ်အထိ၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကအတိုင်းအတာကို ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်ဖြင့် ဗီဒီယိုများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည် ကလစ်များရယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အများအားဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် ဗီဒီယို ခေါင်းစဉ်များနှင့် ပုံသေးများပါရှိသော ကလစ်စာများကို အသုံးပြုမှု တိုးလာစေသည်။ ဤကလစ်နှိပ်ကွက်ဗီဒီယိုများသည် ကြည့်ရှုမှုအများအပြားရနိုင်သော်လည်း ပရိသတ်ကို ထိန်းထားနိုင်မှုနှုန်းမှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ မြင့်မားသော bounce နှုန်းသည် သုံးစွဲသူများက အကြံပြုချက်ကို မကျေနပ်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်သည် ဗီဒီယိုတစ်ခု၏ အရည်အသွေး သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှု၏ အကောင်းဆုံးညွှန်ပြချက်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနားလည်ခဲ့သည်။
ဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုင်းတာမှုမှာ အသုံးပြုသူသည် ဗီဒီယိုအတွက် အသုံးပြုသည့်အချိန်ပမာဏဖြစ်ကြောင်း YouTube မှ သိရှိခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုသူသည် ဗီဒီယိုကို အဆုံးအထိ ကြည့်ရှုသည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ကျေနပ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ YouTube ၀င်ငွေအများစုကို ကြော်ငြာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြည့်ရှုသူများအား ဗီဒီယိုများကို တတ်နိုင်သမျှကြာရှည်ကြည့်ရှုစေလိုကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာသူများသည် ၎င်း၏အရည်အသွေးစာရင်းအတွက် YouTube ကို အသိအမှတ်ပြုကြပြီး ၎င်းသည် ပရိသတ်အတွက် နေ့စဉ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
2012 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် YouTube algorithm အသစ်ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ 'Watch Time' ကို အခြေခံ၍ ဤ အယ်လဂိုရီသမ်အသစ်သည် ကြည့်ရှုသူများ ပါဝင်မှုကို ထိန်းထားနိုင်သော ဗီဒီယိုများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ YouTube သည် ဗီဒီယိုများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို စတင်ချိန်ညှိခဲ့ပြီး YouTube တွင် အချိန်အကြာဆုံး ကြည့်ရှုသူများကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ သက်သေပြခဲ့သောသူများကို ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အယ်လဂိုရီသမ်အသစ်ဖြင့်၊ ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်ကို အကြောင်းအရာအဆင့်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်သူအဖြစ် မသတ်မှတ်တော့ပါ။
Watch Time သည် SEO ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် YouTube အသုံးပြုသည့် တိုင်းတာမှုများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ YouTube သည် သင့်ကြည့်ရှုသူများ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသည့်အချိန် စုစုပေါင်းပမာဏအဖြစ် Watch Time ကို ဖော်ပြသည်။ YouTube Creator Playbook သည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည့် ဗီဒီယိုများကို ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့် အကြံပြုထားသည့် ဗီဒီယိုများတွင် ပိုမိုမြင့်မားစွာပေါ်စေရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ကြည့်ရှုသူများ၏အမြင်တွင် သင့်ချန်နယ်နှင့် ဗီဒီယိုများ၏တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန် တစ်ခုတည်းသောဗျူဟာ မရှိပါ။ ဘက်စုံ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ YTpals မှ YouTube ကြည့်ရှုချိန်နာရီများကိုပင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဲဒါကို မရောက်ခင်မှာ၊ သင်ကိုယ်တိုင် သိထားသင့်တဲ့ YouTube ကြည့်ရှုချိန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာတချို့ ရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာ၊ ကြည့်ရှုသည့် ပရိသတ် ထိန်းထားနှုန်းနှင့် ခန့်မှန်းခြေ မိနစ်များသည် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသော အချက်နှစ်ချက် ဖြစ်သည်။ သင့်အကြောင်းအရာပေါ်တွင် ကြည့်ရှုသူများအသုံးပြုသည့်အချိန်ပမာဏကို မိနစ် သို့မဟုတ် စက္ကန့်ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ ပရိသတ်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းသည် သင့်အကြောင်းအရာအတွက် ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအသုံးပြုသည့် ပျမ်းမျှအချိန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ မြင့်မားသော ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းသည် အသုံးပြုသူ၏အာရုံကို ထိန်းထားနိုင်သည့် ဗီဒီယို၏စွမ်းရည်ကို ညွှန်ပြနေသည်။ သင့်ဗီဒီယိုသည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အသုံးပြုသူ၏ ကြည့်ရှုချိန်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် နည်းလမ်းကို YouTube က စောင့်ကြည့်သည်။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ YouTube သည် အသုံးပြုသူစက်ရှင်တစ်ခုချင်းစီ၏ ကြည့်ရှုချိန်ကို နှစ်သက်သည်။ Watch Time သည် သင့်ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုသည့်ပမာဏနှင့်သာမက YouTube ပေါ်ရှိ သုံးစွဲသူတစ်ဦး၏ ကြည့်ရှုချိန်အတွက် သင့်ဗီဒီယို၏ ပံ့ပိုးပေးမှုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိက ပန်းတိုင်မှာ ကြည့်ရှုသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ဆိုက်ပေါ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပါဝင်နေစေရန် ဖြစ်သောကြောင့် ကြည့်ရှုသူ သီးသန့် သတ်မှတ်ချိန်သည် YouTube အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
စက္ကန့် 30 ရှိသော ဗီဒီယိုတစ်ကားကို မိနစ် 20 အထိ တိုးချဲ့ပါက ကြည့်ရှုချိန်မှ ဆုလာဘ်ကို ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သော့ချက်မှာ ကြည့်ရှုသူများကို အချိန်ကြာကြာ စွဲမြဲစေမည့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဗီဒီယိုများ ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ YouTube သည် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ သုံးစွဲသူများ၏ ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးစေသည့် အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှုနေသည်။
YouTube ကြည့်ရှုချိန်ကို နားလည်ခြင်းအတွက် ဥပမာ
အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် YouTube တွင် အထူးသဖြင့် တစ်ခုခုကို ရှာဖွေပြီး သင့်ဗီဒီယိုကို ဦးစွာကြည့်ရှုသည်။ ယင်းနောက်၊ အသုံးပြုသူသည် ဆက်စပ်ဗီဒီယိုများကို ဆက်တိုက်ကြည့်ရှုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ကြည့်ရှုချိန်သည် ထိုဗီဒီယိုစီးရီးများတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ရှင်ကြည့်ရှုချိန် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည် ဗီဒီယိုကိုထားခဲ့ကာ အခြားရှာဖွေမှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါက ကြည့်ရှုချိန်ကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖြင့် YouTube ကြည့်ရှုသည့် အပိုင်းအသစ်ကို ဖန်တီးပါက ကြည့်ရှုချိန်ကို အပြုသဘော သက်ရောက်ပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် အခြားဆက်စပ် YouTuber ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန် ရွှေ့ထားသောကြောင့် တည်ထောင်ထားသည့် YouTuber ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ ကြည့်ရှုခြင်းများကို တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
YouTube ကြည့်ရှုချိန်၏ အရေးပါမှု
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြည့်ရှုချိန်အကြောင်း သိလာသောကြောင့်၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူအတွက် ကြည့်ရှုချိန်၏ အရေးပါပုံကို လေ့လာကြည့်ကြစို့-
အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာ: ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ဗီဒီယိုများကို အဆုံးအထိ တစ်လျှောက်လုံးတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနေပါက၊ သင်၏ YouTube အကြောင်းအရာသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသည်ဟူသော အချက်ကို ညွှန်ပြပါသည်။ YouTube သည် သင်၏ဗီဒီယိုများကို နောက်ဆုံးတွင် မျက်နှာသာပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အကြံပြုထားသည့် ဗီဒီယိုများအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အဆင့်ကို တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ငွေရှာခြင်း− AdSense ဖြင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် YouTube တွင် ငွေရှာရန်အတွက်၊ သင်၏ကြည့်ရှုချိန်တိုင်းထွာချက်များသည် အထင်ကြီးစရာကောင်းနေရန် အရေးကြီးပါသည်။ YouTube မူဝါဒအသစ်အရ၊ သင်သည် ငွေရှာခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူလိုပါက YouTube တွင် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး စုဆောင်းကြည့်ရှုမှု နာရီ 4,000 ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှု- သင့် YouTube ချန်နယ်တွင် ကြည့်ရှုချိန် တိုးလာပါက၊ ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်အကြောင်းအရာကို ပျော်ရွှင်စေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သင်သည် စေ့စပ်ထားသော ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်ဟူသော အချက်ကို ညွှန်ပြနေသည်။
သင့်ချန်နယ်၏ ကြည့်ရှုသည့်နာရီများကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန် နည်းလမ်းများကို မရှာဖွေမီ၊ သင့်ချန်နယ်၏ စာရင်းအင်းများကို ကြည့်ရှုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းအတွက်၊ သင်သည် YouTube တွင် Creator Studio ကိုဖွင့်ပြီး ဘယ်ဘက်မီနူးမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတက်ဘ်ကို ဖွင့်ရန် လိုအပ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု စာမျက်နှာတွင်၊ ဇယား၏အောက်ခြေရှိ “နောက်ဆုံး ၃၆၅ ရက်မြင်ကွင်း” ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်အကြောင်းအရာကို လူများကြည့်ရှုသုံးစွဲခဲ့သည့် စုစုပေါင်း မိနစ်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိန်းဂဏန်းများသည် နာရီပေါင်း 365 သို့မဟုတ် 240,000 ပြပါက၊ သင်သည် ငွေရှာခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်ပြီး သင်သည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
Audience Retention ကိုနားလည်ရန် Analytics ကိုအသုံးပြုခြင်း။
သင့်ပရိသတ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တသမတ်တည်း ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသော်လည်း သင့်ပရိသတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုသည် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားနိုင်သည့် ဗီဒီယိုထဲတွင် အချို့အချက်များရှိပါသည်။ သင့်ချန်နယ်ရှိ ပရိသတ်ထိန်းသိမ်းမှုကျဆင်းရခြင်း၏ နောက်ကွယ်ရှိအကြောင်းရင်းများကို နားလည်ရန် ပရိသတ်ထိန်းသိမ်းမှုမက်ထရစ်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကဏ္ဍအောက်ရှိ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတက်ဘ်တွင် ပရိသတ်ထိန်းသိမ်းထားမှုအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုရှိ သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်များနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည့် ပရိသတ်ထိန်းထားနှုန်းရှိ အထွတ်အထိပ်များနှင့် ချိုင့်များကို သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဗီဒီယို၏ပထမ 15 မိနစ်အတွင်း သင့်ပရိသတ်များ၏အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သော နည်းလမ်းအချို့ရှိသည်။
အဲဒီထဲက တချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်။
နေရာကို အမြန်ရောက်ပါစေ။: သင့်ဗီဒီယိုသည် ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာအချို့ကို ရှင်းပြသည် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်ခန်းစာတစ်ခုပေးမည်ဆိုပါက၊ ပရိသတ်သည် အကြောင်းအရာကို ချက်ချင်းရောက်ချင်သည်။ ပင်မအကြောင်းအရာကို အမြန်မရောက်ရှိပါက ကြည့်ရှုသူများ ပိတ်သွားနိုင်သည်။
Intro Music ကို ဖယ်ရှားပါ။- သင့်ဗီဒီယိုအတွက် နိဒါန်းမှာ အထူးရှည်နေပါက ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ချန်နယ်ကို စွန့်ခွာသွားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင်၊ အချို့သော အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည် ကြည့်ရှုသူများအား “ခေါင်းလောင်းအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်” ရန် တောင်းဆိုသည့်အချိန်များစွာကို သုံးစွဲကြသည်။ နိဒါန်းကို အတိုချုံ့ထားရန်နှင့် သင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းပြောမည့်အရာများကို အစမ်းကြည့်ရှုမှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
Click baits မသုံးပါနှင့်: ကြည့်ရှုသူများကို မလှည့်စားဘဲ တိကျသော ဗီဒီယို ခေါင်းစဉ်များနှင့် ပုံသေးများကို အသုံးပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် clickbait အကြောင်းအရာကို ပြုလုပ်ပါက ကြည့်ရှုသူများသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်ချန်နယ်သို့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မရနိုင်တော့ပါ။ သင့်ကြည့်ရှုသူများ၏ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို နှိုးဆွနိုင်သော အခြားနည်းလမ်းမှာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကြောင်း၏ အထွတ်အထိပ်၏ အထွတ်အထိပ်ကို ပြသခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။
သင်၏ YouTube ချန်နယ်အတွက် ကြည့်ရှုချိန်ကို မည်သို့တိုးမြှင့်မည်နည်း။
ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ဗီဒီယိုများပေါ်တွင် အချိန်များစွာကို သုံးစွဲနေပါက၊ ထို့နောက် YouTube algorithm သည် ရှာဖွေမှုအကြံပြုချက်များတွင် သင့်ချန်နယ်နှင့် ဗီဒီယိုများကို မီးမောင်းထိုးပြမည်ဖြစ်သည်။ YouTube တွင် ကြည့်ရှုသူများ၏ session time ကို တိုးစေမည့် ဗီဒီယိုများကို အာရုံစိုက်မည်ဟု ယခင်ကလည်း YouTube က ရှင်းပြထားသည်။ ၎င်းသည် သင့်ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် လူမှကြည့်ရှုသည့် နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုသာမကဘဲ ဗီဒီယိုများပြီးနောက် ဆက်တိုက်ကြည့်ရှုသည့်အချိန်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ သင့်ချန်နယ်အတွက် ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန် တစ်ခုတည်းသောဗျူဟာ မရှိပါ။ နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုသည် YouTube ကြည့်ရှုချိန်များကို ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုချိန်များဝယ်ယူခြင်း၊ သင့်ချန်နယ်၏ကြည့်ရှုချိန်နှင့် ကြည့်ရှုသူများ၏စက်ရှင်ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုလည်း သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1. သင့်ဗီဒီယို၏ နိဒါန်းကို အားကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ပြုလုပ်ပါ။
ပရိသတ်ကို အစကတည်းက ချိတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဗီဒီယို၏ ပထမ 15 စက္ကန့်သည် ပရိသတ်၏ အာရုံကို ဖမ်းစားရန် အရေးကြီးသည်ဟု မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိသည်။ YouTube Playbook တွင် ပါဝင်သည့် ပါဝါမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်အချို့ပါရှိသည်-
ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပထမဘောင်: ဗီဒီယို၏ ပထမဘောင်သည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆွဲဆောင်မှုရှိသင့်သည်။
ကြည့်ရှုသူများနှင့် ထိတွေ့ပါ။− ကြည့်ရှုသူများနှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုရန် ကြိုးစားသင့်ပြီး ပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ်ထက် ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်းစီကို ရည်ညွှန်းပါ။
သူတို့ရဲ့ သိချင်စိတ်ကို နှိုးဆွပေးပါ။: ကြည့်ရှုသူများကို တစ်ခုခုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုသူများကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။
အပိုင်း အစမ်းကြည့်: သင်သည် 15 စက္ကန့်အောက်ရှိသော ဗီဒီယို၏ အကြိုကြည့်ရှုမှုလေးကို တင်ပြနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ပရိသတ်က ဘာကိုမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာ သိတယ်။
သင်သည် ဗီဒီယို၏ အကြောင်းအရာကြွယ်ဝသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစပိုင်းတွင် အသုံးပြုသောအခါတွင် သင့်ပရိသတ်သည် သင့်အကြောင်းအရာကို အနီးနားတွင် ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်ခြေပိုများပါသည်။
2. clickbait မသုံးပါနှင့်
သင့်ဗီဒီယိုများတွင် ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်လိုပါက click baits အလုပ်မလုပ်ကြောင်း လူသိများသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ သင်သည် ကတိအတိုင်းမဖော်ပြပါက ကြည့်ရှုသူများသည် အခြားအကြောင်းအရာကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက် ပုံသေးနှင့် ခေါင်းစဉ်ကို ပေးသောအခါ၊ ပရိသတ်အား ၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသည့် ဗီဒီယိုအချို့ကို ပေးစွမ်းရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားသင့်သည်။ ဖန်စီလိုဂို သို့မဟုတ် နိဒါန်းတစ်ခုဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခုစတင်ခြင်းသည် မိုက်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း အဓိကအချက်မှာ အမြန်ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
3. ဗီဒီယိုများတွင် အခန်းများအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုပါ။
YouTube တွင် အခန်းများဖန်တီးနိုင်စေမည့် ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိသည်။ အခန်းများသည် ရှည်လျားသောဗီဒီယိုကို အပိုင်းများခွဲခြမ်းရန်သာမက၊ ဗီဒီယိုတွင် နောက်လာမည့်အရာများကို ကြည့်ရှုသူများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။ သင့်ဗီဒီယိုရှိ အခန်းများအင်္ဂါရပ်များကို ထည့်သွင်းလိုပါက၊ ဗီဒီယိုအပိုင်းများကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အပိုင်း သို့မဟုတ် အခန်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင် စံနမူနာပြကောင်းသော နိဒါန်းနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခု ရှိသင့်သည်။ အခန်း၏ အကြမ်းဖျဉ်း အကြမ်းဖျဉ်းကို ကြိုတင်ဖန်တီးခြင်းသည် ဤကိစ္စတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုမှာ အချိန်တံဆိပ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသော အခန်းများကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကြည့်ရှုသူများသည် ရှည်လျားသော ဗီဒီယို၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ကြည့်ရှုရန် မတူညီသော အချိန်တံဆိပ်များကို ပြောင်းနိုင်သည်။
4. ပုံစံနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်ပါ။
သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်လိုပါက သင့်ဗီဒီယိုများသည် ကြည့်ရှုသူများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ နှောက်ယှက်သည့်ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကြည့်ရှုသူများပါဝင်မှုကို ထိန်းထားပေးသည့် ဗီဒီယိုများပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သောဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုတွင် အလားတူရုပ်ပုံများနှင့် ဇာတ်ကြောင်းများ ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်သည့်အခါ လူတို့သည် မကြာခဏ ငြီးငွေ့လာတတ်သည်။ ကင်မရာထောင့်ပြောင်းခြင်း၊ စခရင်ပေါ်ရှိ ဂရပ်ဖစ်နှင့် B-roll ကဲ့သို့သော အနှောင့်အယှက်ပေးသည့်နည်းပညာများသည် ကြည့်ရှုသူများ၏အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သည်။ Pattern Interrupt သည် အခြေခံအားဖြင့် သီးခြားအပြုအမူ၊ အတွေးအမြင် သို့မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲပေးသည့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းပညာကို အပြုအမူဆိုင်ရာ စိတ်ပညာနှင့် အာရုံကြောဘာသာစကား ပရိုဂရမ်များဖြင့် ပံ့ပိုးထားသည်။ Pattern Interrupt ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို သင်ထည့်သွင်းသောအခါတွင် ၎င်းသည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပြီး ကြည့်ရှုသူများကို စွဲမြဲစေမည့် ရုပ်ပုံများနှင့် ဇာတ်ကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။
5. အပြိုင်အဆိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အဓိကစကားလုံးသုတေသန
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာရှိ သော့ချက်စကားလုံးများ၏တန်ဖိုးကို လျစ်လျူမရှုနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် သင့်ဗီဒီယိုများကိုလွှင့်တင်နေစဉ်တွင် YouTube နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သော့ချက်စာလုံးများကို ရှာဖွေရန် အရေးကြီးပါသည်။ သော့ချက်စကားလုံးကိရိယာကို အသုံးပြု၍ သော့ချက်စာလုံးများကို သုတေသနပြုနိုင်သည်။ သင်လုပ်လိုသည်မှာ အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ရိုက်ထည့်ပြီး သော့ချက်စကားလုံး ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ပရိသတ်၏ ရှာဖွေမှု စိတ်ဝင်စားမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ YouTube ပေါ်ရှိ အလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်အကြံပြုချက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဓိကစကားလုံးသုတေသနကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပြိုင်ဖက်ချန်နယ်များ ဖန်တီးနေသည့် အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကို သိရှိနိုင်ရန် ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်သင့်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် ဗီဒီယိုတက်ဂ်များ၊ အဓိကစကားလုံးများနှင့် မှတ်ချက်များအကြောင်း ရှာဖွေရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အပြိုင်အဆိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ထုတ်နုတ်ထားသော အချက်အလက်များကို ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို နားလည်မှုရှိလာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖြင့် ဖြည့်စွက်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာကွာဟချက်များကို ရှာဖွေရာတွင်လည်း ကူညီပေးပါသည်။
6. သင့်ဗီဒီယိုများတွင် ပုံပြင်ပြောခြင်းကို အသုံးပြုပါ။
သင့်ဗီဒီယိုများတွင် ကြည့်ရှုသူများ ပါဝင်နေစေရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ ဇာတ်လမ်းပုံစံ ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံပြင်ပြောခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင်ယူနေစဉ်တွင် ဖျော်ဖြေလိုသော ကြည့်ရှုသူများအတွက် ကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အကြောင်းအရာကို ဇာတ်လမ်းပုံစံဖြင့် ဖော်ပြရန် ဆန်းသစ်ပြီး ထူးခြားသောနည်းလမ်းများကို သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကြည့်ရှုသူများကို စိတ်ဝင်စားစေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သင့်ဗီဒီယိုများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးစေသည်။ ဗီဒီယိုဖန်တီးနေချိန်တွင် သင့်အား ဖျော်ဖြေမှုနှင့် အသိပညာပေးသည့် အကြောင်းအရာများ ဖန်တီးရန် မမေ့ပါနှင့်။ ဗီဒီယိုသည် မည်မျှကြာစေကာမူ ဇာတ်ကြောင်းပုံစံနှင့် ကင်မရာပေါ်ရှိ တင်ဆက်မှုပုံစံဖြင့် ဇာတ်လမ်းကို စဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။
7. အခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
YouTube ပေါ်ရှိ ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်သော စိတ်တူကိုယ်တူရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ သင်သည် အခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့် ပူးပေါင်းသောအခါ၊ ကြည့်ရှုသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး သင့်ပရိသတ်အခြေခံကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး သင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ၏ချန်နယ်ရှိ အလားတူအကြောင်းအရာကို ကလစ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုသူများ၏ စုဆောင်းကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရာတွင်လည်း ကူညီပေးပါသည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မိတ်ဖက်များအဖြစ် သဘောထားပြီး သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအဖြစ် သဘောထားသင့်ပါသည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် ပရိသတ်အသစ်များရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်နေသော်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ပိုမိုစစ်မှန်ပြီး မျှဝေထားသောတန်ဖိုးများပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
8. ပိုရှည်သော ဗီဒီယိုများ
ဗီဒီယို၏ကြည့်ရှုချိန်သည် အရှည်ကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပိုရှည်သောဗီဒီယိုသည် ကြည့်ရှုသူအနည်းငယ်သာရှိသဖြင့် သိသာထင်ရှားသောကြည့်ရှုချိန်ပမာဏကို ရနိုင်သော်လည်း ပိုတိုသောဗီဒီယိုသည် တူညီသောကြည့်ရှုချိန်ရရှိရန် ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် ပိုများမည်ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသောဗီဒီယိုများသည် ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ပိုကောင်းသည်၊ သို့သော် အဓိကမှာ ၎င်းတို့သည် ကြည့်ရှုသူများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသင့်သည်။ ဤပိုရှည်သော ဗီဒီယိုများသည် ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို သတိရစေမည့် ဖန်တီးထားသင့်သည်။ သင့်ရှိပြီးသား ဗီဒီယိုအတိုချုံးအကြောင်းအရာအချို့ကို သက်တမ်းတိုးရန် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာကို ချဲ့ထွင်ရန် ထူးခြားသောနည်းလမ်းများကို သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ပိုရှည်သော ကွဲပြားမှုများ၏ အောင်မြင်မှုသို့ ရောက်သည်နှင့်၊ သင်သည် ဗီဒီယိုတိုများ ပုံစံဖြင့် ပါရှိသည့် တူညီသော အကြောင်းအရာကို ဖျက်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ ဗီဒီယိုစီးရီးတစ်ခု ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုစီးရီးများမှ စုဆောင်းထားသော ကြည့်ရှုချိန်သည် ပိုကြီးဖွယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြည့်ရှုသူများသည် ဆက်စပ်ဗီဒီယိုများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤစီးရီးသည် သီးခြားအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအပေါ် အာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ဇာတ်လမ်းပုံစံနဲ့တောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဗီဒီယိုစီးရီးသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါက၊ ကြည့်ရှုသူများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးလာစေမည့် သင့်အကြောင်းအရာအတွက် ကြည့်ရှုသူများ ဆက်လက်ပြန်လာပါမည်။ ဗီဒီယိုစီးရီး၏ ဆောင်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ကြည့်ရှုမှုအများဆုံးရှိသည့် ဗီဒီယိုများကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ အကြောင်းအရာအသစ်ဖန်တီးရန်အတွက် အခြေခံအနေဖြင့် ဤဗီဒီယိုများကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
10. မိုက်ခရိုနှင့် မက်ခရိုကြည့်ရှုမှုများကို နားလည်ရန် YouTube Analytics ကို အသုံးပြုပါ။
YouTube ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဏ္ဍမှ သင့်ချန်နယ်နှင့်ပတ်သက်သော ထိုးထွင်းဉာဏ်ကောင်းများကို ရယူနိုင်ပါသည်။ သင့်ချန်နယ်ရှိ မက်ခရိုနှင့် မိုက်ခရိုကြည့်ရှုမှုများအကြောင်း အချက်အလက်အသစ်များကိုလည်း သင်ရနိုင်သည်။ YouTube ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်သည် သင့်အား ရက်နှင့်အချိန်များတွင် ကြည့်ရှုကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းအပြင်၊ ဗီဒီယိုများပေါ်ရှိ ဒေတာများကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူများ၏ ပျမ်းမျှကျောင်းဆင်းချိန်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဏ္ဍကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အနာဂတ်ဗီဒီယိုများတွင် ပရိသတ်ပါဝင်မှုကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ ကြည့်ရှုသူများအတွက် အကြောင်းအရာကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်စေမည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ YouTube ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ပရိသတ်၏လိုအပ်ချက်အရ သင့်အကြောင်းအရာကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် အချက်အလက်များကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
11. ပို့စ်တင်ရန် အချိန်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။
သင့်ချန်နယ်အတွက် ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်လိုပါက သင့်ဗီဒီယိုများကို ရှာဖွေနိုင်ရပါမည်။ ယင်းအတွက်၊ ဗီဒီယိုများသည် ရှာဖွေမှုအကြံပြုချက်များကို အချိန်မှန်တွင် ပြသရမည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းသုတေသနပြုချက်အရ၊ YouTube တွင် အကြောင်းအရာများတင်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်သည် နေ့လယ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြည့်ရှုချိန်သည် ည ၈ နာရီဟု သတ်မှတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုမှုအများဆုံးနာရီများအတွင်း သင့်ဗီဒီယိုပေါ်လာကြောင်း သေချာစေရန်၊ ၎င်းတို့အတွက် အညွှန်းရယူရန် အချိန်များစွာချန်ထားသင့်သည်။ ဤအကြံပြုချက်သည် အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင် ဗီဒီယိုများကို အပ်လုဒ်လုပ်လိုပါက၊ အခြားနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ အင်တာနက်အသွားအလာက ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုများတာကြောင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဗီဒီယိုတွေကို နည်းနည်းစောပြီး တင်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
12. YouTube အစီအစဉ်များကို အသုံးပြုပါ။
ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကြည့်ရှုသူသည် သင့်ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန် မလိုအပ်ပါ။ အသုံးပြုသူသည် အခြားသူများ၏ ဗီဒီယိုများပါ၀င်သည့် အစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှုပါက ကြည့်ရှုချိန် တိုးလာနိုင်သည်။ အစီအစဉ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြည့်ရှုသူများကို ပိုမိုမျဉ်းသားသောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံသို့ လမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့် သင့်အတွက် အလွန်အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူများ၏ စုစုပေါင်းကြည့်ရှုချိန်စက်ရှင်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်စေပါသည်။ အစီအစဉ်များဖန်တီးရန်အတွက် သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ ရှိုးများ၊ နှင့် စီးရီးအားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ဗီဒီယိုများကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော အစီအရီဖြင့် စုစည်းပါ။ အစီအစဉ်များသည် အကြံပြုထားသော ဗီဒီယိုရလဒ်များတွင် သင့်ဗီဒီယိုများပေါ်လာနိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေသည်။
Playlists အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံအတွက် ၎င်းတို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီဒီယို၏ 'အဝင်' နှင့် 'ထွက်' အမှတ်များကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် စတင်ချိန်နှင့် ပြီးဆုံးချိန်များ၏ အင်္ဂါရပ်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန် သင့်အစီအစဉ်ရှိ ဗီဒီယိုများ၏ နိဒါန်းနှင့် အစွန်းများကို ချုံ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ထည့်သွင်းထားသော ပလေယာများနှင့် YouTube ချန်နယ်စာမျက်နှာတွင်လည်း ပြသရန်စာရင်းကို ထည့်သွင်းရန် မမေ့ပါနှင့်။ မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့် သင့်ဖွင့်စာရင်းစာမျက်နှာသို့လည်း လင့်ခ်ချိတ်နိုင်သည်။
13. End Slates နှင့် Cards ကိုသုံးပါ။
အရမ်းမြန်လွန်းတာကို နှိပ်တာထက် လူတွေက သင့်ဗီဒီယိုတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ သင်အသုံးချနိုင်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေရှိပါတယ်။ လှည့်ကွက်များထဲမှတစ်ခုမှာ သုံးစွဲသူများကို ဗီဒီယိုစခရင်ပေါ်တွင် လင့်ခ်တစ်ခုထည့်နိုင်စေသည့် YouTube ရှိ Cards လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကတ်ပုံစံဖြင့် ဤဗီဒီယိုလင့်ခ်များသည် အခြားဗီဒီယို၊ အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ချန်နယ်အချို့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ YouTube ကတ်များ အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ပရိသတ်များ မကြာခဏ ကျဆင်းသွားသည့် ကတ်ကို ထားရှိခြင်းသည် ကောင်းသော အကြံဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ကြည့်ရှုသူအား ၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုချိန်ကို အဆုံးသတ်မည့်အစား ဆက်စပ်ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ End Slates ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကြည့်ရှုသူများကို အခြားဆက်စပ်ဗီဒီယိုသို့ လမ်းညွှန်ရန်အတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
14. Teaser များကို ပေါင်းစပ်ပါ။
မကြာခဏဆိုသလို၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ရှည်လျားသော ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်လျှင် သင့်ကြည့်ရှုသူများသည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရပ်တန့်သွားနိုင်သည်။ သင့်ကြည့်ရှုသူများ အချိန်ကြာကြာ စွဲမြဲနေစေရန် သေချာစေရန် နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သင့်ဗီဒီယို၏အနှစ်သာရကို အနှစ်ချုပ်ပေးသည့် သင့်ဗီဒီယိုများ၏အစတွင် ကြော်ငြာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤအမြည်းများသည် ကြည့်ရှုသူများကို ဗီဒီယိုမှမျှော်လင့်ထားသည်များကို အကြံဉာဏ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါက၊ YouTube သည် အလားအလာရှိသောကြည့်ရှုသူများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဤနည်းဗျူဟာများကို သင်အသုံးပြုသောအခါတွင် စာရင်းသွင်းသူများနှင့် ကြည့်ရှုမှုများ ပိုမိုရရှိစေရုံသာမက သင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ကြည့်ရှုသူများ၏ ရင်းနှီးမှုကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ YouTube ကြည့်ရှုချိန်များကို ဝယ်ယူပါ။ YTpals မှ သင်၏ကြည့်ရှုချိန်ကို သိသာစွာ တိုးမြှင့်ရန် ဤဗျူဟာများကို တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။ YTpals ၏ Buy YouTube ကြည့်ရှုမှုနာရီဝန်ဆောင်မှုဖြင့် သင်သည် YouTube ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုချိန် နာရီ 4,000 သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သင့်ချန်နယ်ကို ငွေရှာရန် အခွင့်အရေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ အော်ဒါတင်ပြီး 24-72 နာရီအတွင်း ဝန်ဆောင်မှု စတင်ပါမည်။
YTpals သည် သင့် YouTube ချန်နယ်ကို ပိုမိုအောင်မြင်စေရန်အတွက် ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပိုသိဖို့၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယနေ့!
1000 ယောက် (ဒေါ်လာ ၂၀)5000 ယောက် (ဒေါ်လာ ၂၀)10000 ယောက် (ဒေါ်လာ ၂၀)25000 ယောက် (ဒေါ်လာ ၂၀)50000 ယောက် (ဒေါ်လာ ၂၀)100000 ယောက် (ဒေါ်လာ ၂၀)